के हो डेल्टा प्लस भेरियन्ट ? - Dhangadhi Khabar
शनिबार १६, साउन २०७८ ०७:०२
भारतले मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ४० संक्रमितमा डेल्टा भेरियन्टको नयाँ म्युटेसन देखिएको बताएको छ । यससँगै सरकारले राज्यहरुलाई परीक्षण बढाउन निर्देशन पनि दिएको छ । यसलाई डेल्टा प्लस नाम दिइएको छ । यसले विस्तारै घट्दै गएको कोरोनाको संक्रमण पुनः बढ्नसक्ने आशंका गरेको छ ।
कोरोनाविरुद्ध अहिले मानिसलाई दिइएको खोपलाई पनि छल्दै यो भेरियन्टले संक्रमित बनाउन सक्ने आशंकाको कारण डेल्टा प्लसको संक्रमणप्रति चासो बढेको छ ।
डेल्टा प्लस भेरियन्ट भारतमा भेटिएको डेल्टा भेरियन्टबाटै म्युटेट भएको भेरियन्ट हो । यसलाई एवाई १ नामले पनि चिनिन्छ । पहिलोपटक गत अप्रिल ११ मा यो भेरियन्ट भारतमा देखिएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
यो भेरियन्टमा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको बिटा भेरियन्ट पनि देखिएको छ । जसको कारण वैज्ञानिकहरुले डेल्टा प्लस भेरियन्ट अझै संक्रामक हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिटा भेरियन्टले मानिसको प्रतिरोधी क्षमताबाट बचेर मानिसलाई संक्रमित बनाउन सक्ने भन्दै यो चासोको विषय रहेको बताएको छ ।
बिटा भेरियन्ट मानिसको प्रतिरोधी क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्ने भेरियन्टको रुपमा चिनिएको भारतका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ शाहिद जमील बताउँछन् ।
अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ देखियो डेल्टा प्लस ?
जुन १६ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कम्तीमा दुई सय संक्रमितमा डेल्टा प्लस भेरियन्ट देखिएको छ । जसमध्ये बेलायतमा ३६, क्यानडामा १, जापानमा १५, पोल्याण्डमा ९, पोर्चुगलमा २२ , रुसमा १, स्विट्जरल्याण्डमा १८, टर्कीमा १ र अमेरिकामा ८३ संक्रमितमा यो भेरियन्ट देखिएको छ । नेपालमा ९ जनामा यो भेरियन्ट देखिएको पुष्टि भइसकेको छ ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार थप ४० जनामा यो भेरियन्टको संक्रमण देखिएको बताएको छ । भारतको महाराष्ट्र, केरला र मध्यप्रदेशमा यो भेरियन्टको संक्रमण देखिएको हो । यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यो भेरियन्टको संक्रमण त्यति ठूलो मात्रामा नफैलिएको पाइएको बताएको छ ।
अहिलेसम्म यो भेरियन्ट विश्वका ८० मुलुकभन्दा धेरैमा फैलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले डेल्टा प्लस भेरियन्टविरुद्ध कोरोना खोपले कत्तिको काम गर्छ भन्ने विषयमा भारत र विश्वभर अध्ययन भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले यसलाई पनि डेल्टा भेरियन्टकै एक भागको रुपमा लिइएको बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो भेरियन्ट सामान्य नदेखिएको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ । डेल्टाको कारण संक्रमण फैलिने दर धेरै हुँदा यसबाट हुने सार्वजनिक स्वास्थ्यको जोखिम पनि बढी रहेको डब्ल्यूएचओको भनाइ छ ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यो भेरियन्टको संक्रमण देखिएको स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नु जरुरी रहेको बताएको छ ।
यद्यपि जानकारहरु यससको संक्रमणबारे जानकारीका लागि पर्याप्त तथ्यांक नभएको बताउँछन् । सामान्यतया भाइरसले आफ्नो रुप परिवर्तन गर्नु सामान्य रहेकाले यो भेरियन्ट धेरै वा कम संक्रामक छ भनेर भन्न नसकिने भारतीय संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. गगनदीप काङ बताउँछिन् ।
उनका अनुसार परीक्षण गरेर बिरामी पत्ता लगाउनु मात्र नभई डेल्टा प्लस भेरियन्टबाट संक्रमित भएका मानिसको बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट यो भेरियन्टबारे अझै धेरै कुरा थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ । अन्य जानकारहरु पनि अहिले नै यो भेरियन्ट धेरै संक्रामक र घातक छ भनेर भन्नु हतार हुने बताउँछन् । त्यसका लागि थप जानकारीहरु थाहा पाउने र यसबारे सतर्क रहनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सोमबार १४, असार २०७८ १०:२० मा प्रकाशित